Quanda धातु जाल बेल्ट समाचार: उद्योग समाचार
एक उपयुक्त धातु जाल बेल्ट कन्वेयर कसरी अनुकूलित गर्ने
उद्योगको विभिन्न उत्पादहरूको लागि कन्भभरहरूको लागि बिभिन्न आवश्यकताहरू छन्। धेरै व्यक्तिहरूलाई मेटल जाल बेल्टको विशेषताहरू र कन्भ्याभ मिडिया कसरी छनौट गर्ने भनेर थाहा छैन। वास्तवमा, धातु जाल बेल्ट एक अनुकूलित उत्पादन हो, जुन आवश्यक भएमा अनुकूलन गर्न सकिन्छ (बिल्कुल / सही छैन)।
स्टेनलेस स्टील जाल बेल्ट कन्वेयर एन्टर-रस्टको सम्बन्धित ज्ञान
â € stain स्टेनलेस स्टीलको सतहमा प्राय: बाक्लो पसिभिएसन लेयर हुन्छ। किन यो जंग लाग्दैन किनकी किनभने यो पारहाय तह ले प्राकृतिक वातावरणको क्षतिको प्रतिकार गर्न सक्दछ। इस्पात निर्माण प्रक्रियामा, अचारको प्रक्रिया अचारको प्रक्रियामा जाल बेल्टको सतहमा हुन्छ।
कसरी जाल बेल्ट कन्वेयरमा स्टेनलेस स्टील जाल बेल्ट स्थापना गर्ने
स्टेनलेस स्टील जाल बेल्ट कन्वेयर बेल्ट हो जुन सामग्री व्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ र जाल बेल्ट कन्वेयरको महत्वपूर्ण अंश हो। कन्वेयरलाई राम्रो उत्पादन प्रविधिको रूपमा बनाउन कन्भियर बेल्ट सही रूपमा स्थापना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
स्टेनलेस स्टील जाल बेल्टको उत्पादन प्रक्रिया के हो?
stain € stain स्टेनलेस स्टील जाल बेल्टको उत्पादन प्रक्रिया मुख्यत: निम्न प्रक्रियाहरूमा विभाजित हुन्छ, जसमध्ये प्रत्येक एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तल हामी स्टेनलेस स्टील जाल बेल्टको उत्पादन प्रक्रिया विस्तारमा परिचय दिनेछौं:
चेन जाल बेल्ट कुन क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ?
चेन जाल बेल्ट: सामग्रीहरू A3 कम कार्बन स्टिल, # 45 # स्टिल, १Cr13 तातो-प्रतिरोधी स्टील, स्टेनलेस स्टील, 4०4 स्टेनलेस स्टील, १Cr18Ni9Ti स्टेनलेस स्टील, ०Cr18Ni14NO2CU2 तातो प्रतिरोधी र एसिड प्रतिरोधी स्टील, आदि हुन्।
धातु स्टेनलेस स्टील जाल बेल्ट प्रयोग गर्दा वातावरणीय क्षयमा ध्यान दिनुहोस्
धातु जाल बेल्टको सेवा जीवन कन्भ्याइ material्ग सामग्री र प्राकृतिक वातावरणको तापमा निर्भर गर्दछ, र कन्वेयर मेष बेल्टको शक्ति तापक्रमको वृद्धिसँगै घट्नेछ।